Ergeyga Gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha oo kulan la yeeshay madaxa save the children UK | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Ergeyga Gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha oo kulan la yeeshay madaxa save the children UK
Muqdisho (SONNA)-Ergeyga Madaxweynaha JFS Xassan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha Gurmadka Abaaraha iyo beni’aaadannimada mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kulan qadka fogaan aragga ah la yeeshay madaxa ugu sarreeya hay’adda Save the Children ee Ingriiska.
Gwen Hines ayaa warbixin dhammeystiran Ergeyga ka siisay howlaha ay hay’addeeda ka qabato gudaha waddanka Soomaaliya.
Ergeyga ayaa uga mahad celiyay dedaalka ay hay’adda Save ku bixineyso samatabixinta bulshada dhibaataysan, isaga oo sidoo kale ka codsaday in ay ka gacan siiyaan sidii dowladda ingiriisku u kordhin lahayd taageerada bani’aadannimo ee dalkeennu baahida weyn u qabo.
Ugu danbeyn, Gwen Hines oo boggaadisay dedaallada dowladda Soomaaliya iyo xafiiska Ergeygu ku bixinayaan arrimaha bini’aadannimada ayaa soo dhaweysay codsiyada Ergeyga, iyada oo taageero dhinacyadaas ku aaddan u ballanqaadday.
Previous articleWasiir-dawlaha Waxbarashada oo soo xiray Tababar socday Muddo 9 cisho ah “Sawirro”
Next articleMaraykanka oo Ukraine u diraya gargaar milatari oo dhan $450-milyan